FSX addon echiche
ajụjụ FSX addon echiche
1 afọ 1 izu gara aga #920 by NitroUK
Anọ m na-eche ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara banyere ọkụ nke ga-enye m ọkụ ọkụ na mpi pointer nke mere na mgbe oge abalị ya na ugbo m bụ Cold and Dark i na-ahụ mgbanwe ndị m ga-agbanye iji mee ka ụgbọ elu ahụ malite / nwuo ...
Enwere ihe dị ka nke a ugbu a? onye nwere ike ime ya? id ji obi ụtọ kwụọ ụgwọ ahụ.
Nhọrọ kacha mma Glenn - G-VODC
"Ugwu na-acha uhie uhie ... Nchekwa na-efe efe"
Daalụ natara: 16
1 afọ 4 ụbọchị gara aga - 1 afọ 4 ụbọchị gara aga #930 by DRCW
Hey, Agaghị m akwado nke a n'ihi na ebe ọ na-anọdụ, poist pouse n'onwe ya ga-etipịa FPS, na-agbakwụnye ihe dị otú a ga-eme mmebi ọzọ n'ụzọ ahụ. Ụzọ kachasị mma bụ iji ọkụ ọkụ mmiri na-agbanye ọkụ n'oge ụgbọ elu. Jide n'aka na ị na-arụ ọrụ ị bụ APU (Aux Power Unit) maka ụgbọelu ndị dị njikere.
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 4 ụbọchị gara aga site na DRCW.